नेपाली मनहरू nepalimanharu.com (शिव प्रकाश ): मान्छेको छाला ओढेको मान्छे
मान्छेको छाला ओढेको मान्छे
भेटिन मान्छे मान्छेभित्र मैले भेटाउने कसरी
एउटै मान्छे फरक छ रूप बताउने कसरी ?
बाहिर उही भित्र छ कोही मान्छेभित्र
देखिन्छ मान्छे आँखाले मात्रै छुट्याउने कसरी ?
मुखले बोल्छ त्यो मान्छे मीठो विष घोल्छ मनमा
देखिने मान्छे बेहोर्नु पर्दा छुटाउने कसरी ?
मान्छेको रूप विराट स्वरूप देखिन्न नभोगी
लुकेर भित्र बसेको त्यो रूप देखाउने कसरी ?
छुपेर भित्र कुमान्छे बस्छ मान्छेको
मान्छे हुँ भन्छ कुमान्छे पनि
था' पाउने कसरी ?
मान्छेको छाला ओढ्दैमा मान्छे हुन्छर त्यो मान्छे
गोठालो बस्छ गाईको बाघ पत्याउने
Bed Nath PulamiJune 26, 2010 at 3:47 PMशिव दाइ अब यो मान्छे र कुमान्छे छुट्याउने / पत्ता लगाउने कसरि भन्दा गफै को भर र चिनेकै भरमा चाही निकै गाह्रो हुने रहेछ ... जब उक्त व्यक्ति संग कुनै ब्यबहार (विशेस त आर्थिक ) गरिन्छ नि ! नर्मल त त्यस्तो समयमा अलिक राम्ररी नै चिन्न सकिन्छ कि ? जस्तो लाग्छ !जेहोस राम्रो लाग्यो गजल !के थाह ! मान्छे, मान्छे हो कि रुप मात्र मान्छे हो ! चैते खडेरीमा झरी पर्यो, साउने कसरी ?ReplyDeleteAdd commentLoad more...